Qoraal Hadda Lagu Helo Isbaanishka iPadOS 14 | Wararka IPhone
Iskuday hadda waxaad kuheli kartaa Isbaanishka iPadOS 14
Caqli ahaan shaqadan oo laga heli karo iPadOS 14 nidaamka qalliinka ayaa sidoo kale laga heli karaa nooca xiga ee hadda ku jira beta, iPadOS 15. Waxaan ka hadleynaa shaqada ay u yeertay Apple «dhadheer»Taas oo uu isticmaalehu awoodo qalinka Apple ugu isticmaal Ipadkaaga si aad gacanta ugu qorto una rogo qoraalka ama xulo erayada adoo sawiraya goobaabin, sidoo kale loo yaqaan qoraal gacmeed xariif ah.
Hagaag, shaqadan oo aan lagu heli karin afkeena hada waa la heli karaa, marka lagu daro ku darista Faransiis, Boortaqiis, Jarmal, Talyaani iyo Isbaanish oo ka kala yimid Mexico iyo Latin America. Marka isticmaale kasta oo haysta ipad iyo qalin Apple wuxuu ku raaxeysan karaa laga bilaabo maanta nooc kasta oo iPadOS 14 ah (ma ogin haddii lagu heli karo nooca beta ee iOS 15).
Qalabkani wuxuu ku dhexjiraa dhammaan nidaamka qalliinka sidaas darteedna isticmaaleyaashu waxay ku dhejin karaan qoraalka codsiyo kala duwan iyaga oo aan u baahnayn inay qaadaan ficil gaar ah oo ay ku sameeyaan. Dareenkan waa inaan dhahnaa taas daqiiqad ikhtiyaarka noo saamaxaya inaan raadino ereyada ama qoraallada gacanta lagu qoro ayaa hadda kaliya lagu heli karaa Ingiriis iyo Shiine. Laakiin howlaha intiisa kale durba waa kuwo firfircoon sidaa darteed dhammaan isticmaaleyaasha haysta iPad-ka iyo qalinka Apple waxay bilaabi karaan inay ku raaxeystaan.
Tusaalaha fudud ee adeegsiga shaqadan ayaa ah, tusaale ahaan, ku qoro qoraal qalinka barta baarista Safari, nidaamku wuxuu awood u leeyahay inuu ogaado oo uu u beddelo qoraal si uu u helo bogga ama wixii la mid ah si fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Iskuday hadda waxaad kuheli kartaa Isbaanishka iPadOS 14
IPad-ka ugu horeeya ee leh shaashadda OLED wuxuu imaan doonaa sanadka 2023
Podcast 12x37: HomePods la shiilay iyo dhibaatooyinka bixinta arimaha gaarka ah